ပြင်ဦးလွင်က ၁၀ နှစ်အရွယ်ကျောင်းသူ (၃) ဦး ဆရာဖြစ်သူမှ မုဒီမ်းကျင့်ခံရမူ - APANNPYAY
/ ပြင်ဦးလွင်က ၁၀ နှစ်အရွယ်ကျောင်းသူ (၃) ဦး ဆရာဖြစ်သူမှ မုဒီမ်းကျင့်ခံရမူ
ပြင်ဦးလွင်က ၁၀ နှစ်အရွယ်ကျောင်းသူ (၃) ဦး ဆရာဖြစ်သူမှ မုဒီမ်းကျင့်ခံရမူ
မုဒီမ်းကျင့်ခံရသူ (၃) ဦး အတွက် ဥပဒေ ဘယ်မှာလဲ?
ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် သပိတ်ကျင်းမြို့နယ် တကောင်းအုပ်စု ကျေးရွာတွင်…
၁၀ နှစ်အရွယ် ခလေးမ ၃ ဦး ကျာင်းတွင် အကြိမ်ကြိမ် မုဒိမ်းပြုကျင့်ခံခဲရသည်။
၁ ယောက်ချင်း/၁ ယောက်ကိုကျင့်နေတုန်း ကျန်သော၂ ယောက်ကို ကြည့်ခိုင်းပြီး ပြုကျင့်သည်ဟု သိရ၏။
ကလေးသုံးဦးမှ ဆရာဖြစ်သူအား ကြောက်၍ အိမ်ကိုမပြောရဲဘူး။
ဆရာဖြစ်သူမှ နေစဉ်အချိန်ပိုခေါ်ပြီး နေ့တိုင်း ကျင့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြောင်း သို့ဖြင့်၍
ကလေးသုံးဦးမှ အကြောက်အကန်ငြင်းခဲ့ကြပြီး ကျောင်းသို့ပင် မသွားရဲလောက်အောင် နောက်ဆုံး ဖြစ်လာသောကြောင့် မိဘတွေစစ်မေးတော့မှ ဖွင်ဖေါ်ထုတ်ပြော ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်လေသည်။
အဆိုပါ ကလေး မိဘများသည် ဆင်းရဲ ချို့တဲ့ကြပြီး l ခေတ်ပညာတတ်များ မဟုတ်ကြသည့်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုးသို့ တိုးတိုးတိတ်တိတ် ပြောပြရာ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ မုဒိမ်းကျင့်သော ကျောင်းဆရာနှင့် တိုးတိုးတိတ်တိတ် ငွေကြေးအနည်းငယ်ဖြင့် ညှိနိုင်းပေးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
သို့သော် အဆိုပါ သတင်း ရပ်ရွာတွင် ပေါက်ကြားပြီးနောက် ရပ်ရွာမှ တတ်သိနားလည်သူမှ သက်ဆိုင်ရာသို့ အကြောင်းကြား ၀ိုင်းဝန်းတိုင်တန်းပေးခဲ့သည်။ ခလေးသုံးဦး၏ မိဘများမှာ တရားရုံးသို့ ဖြေရှင်းရင်ဆိုင်ရန် ရှိကြောင်းသိရပြီး ၄င်းတို့ အနေဖြင့် ရှေ့နေငှားရမ်းရန် ငွေကြေးမတတ်နိုင်သောကြောင့် ယခုချိန်ထိပင် မုဒိမ်းပြုကျင့်ခံရသော ကလေးများအတွက် ကူညီဆောင်၇ွက် ရှေ့နေလိုက်ပါပေးမည့်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်မှ မရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
လွန်ခဲ့သော သောကြာ နေ့တွင် ပထမရုံးချိန်းအဖြင့် လူတွေ့ မေးမြန်းမှု ပြီးဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တရားခံဖြစ် စွဲဆိုခံထားရသူဘက်မှ ငှားရမ်းထားသော ရှေ့နေမှ မေးလာသည့် မေးခွန်းများကို တရားလိုမိဘတွေ ကြောက်ရွံ့နေကြရခြင်းကြောင့် တရားရုံးတွင် ငိုရှိုက်နေကြကြောင်း စာရေးသူအား ပြောပြလာပြီး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲတပ်သားအဆင့်သာသာမျှရှိသော သူတို့၏ ချိမ်းခြောက်ခြင်းအား ခံနေရပြီး စာရေးသူအား သတင်းပေးပို့ ၍ သက်ဆိုင်ရာ အများသိစေနိုင်သော မီဒီယာတခုခုဖြင့် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန် ပြောပြလေသည်။
ဖြစ်စဉ်အား စာရေးသူမှ လေ့လာ၍ သက်ငယ်မုဒိန်းမှုများ အပြီးသတ် သေဒဏ်ပေးရန် လွှတ်တော်ထိပင် တောင်းဆိုလာသည့်တိုင် ရှိနေပြီး ကလေးများဘ၀ တိကျသော အကာကွယ်ပေးနိုင်သည့် ထိရောက် မြန်ဆန်စွာ ကိုင်တွယ် ထိန်းသိမ်းနိုင်သော ဥပဒေ အာဏာသက်ရောက်မှု မရှိသေးကြောင်းကို အများပြည်သူများမှ ဝေဖန်နေကြသည်။
ဖြစ်စဉ်၏ ဖြစ်ရပ်များအား စာရေးသူမှ သိရှိပြီးနောက် အသေးစိတ်လေ့လာသောအချက်တွင်
ကျောင်းဆရာမှ မုဒိန်းကျင့်သည့်မှာ ခိုင်မာနေကြောင်း တွေရှိရပြီး သက်ဆိုင်သောအုပ်ချုပ်ရေးမှုးမှ နှစ်ဖက်အကြားတွင် ငွေကြေး အနည်းငယ် လက်ခံယူပြီး ခြိမ်းချောက် ကြားဝင်ညှိနှိုင်းကြောင်း ပေါ်လွင်ထင်းရှားစွာတွေ့ရလေသည်။
သက်ဆိုင်ရာ ဒေသရှိ ရဲဝန်ထမ်းမှလည်း ပြသနာ အခြေနေအရပ်ရပ်တို့အား လေ့လာခြင်း ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှုများ လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း မရှိပဲ လစ်လျူ ရှု့ထားကြောင်း ပေါ်လွင် ထင်ရှားစွာ တွေရလေသည်။
သို့ဖြစ်၍ အမှုလက်ရှိဖြစ်စဉ်အရ မုဒိမ်းကျင့်သူနှင့် ၀င်ရောက်ညှိနိုင်းပေးသူတို့မှာလည်း အဆိုပါ ပြစ်မှု ဖြစ်စဉ်အတွက် ထပ်မံပြစ်မှု ကျူး လွန်ကြောင်း သုံးသပ်ရသည်။
သို့ကြောင့် အနာဂတ် မြန်မာနိုင်ငံတော်အတွက် အရွယ်မရောက်သူခလေးများ၏ လုံခြုံရေးမှာ ကြီးမားသော အန္တရယ် အချိန်မရွေး ရရှိခံစားနိုင်ရပြီး ပြင်းထန်ပြတ်သားသော ဥပဒေကြောင်းအရ အကာကွာယ်ပေးနိုင်သော အခြေနေမှာ အလွန်အားနည်းနေကြောင်းပါ။
အမှု စီစစ်နိုင်ရန်မြို့နယ် ဒေသ ကျေး၇ွာကိုသာ တင်ပြခတ္တ တင်ပြထား ထားပြီး
အထက်ဖေါ်ပြပါ မုဒီမ်းကျင့်ခံရသူ ကျောင်းသူခလေး(၃) ဦး အမည်ကိုသော်၎င်း
အမှု ကြောင်းအရ မုဒိမ်းကျင့်သော ကျောင်းဆရာနှင့် ညှိနိုင်းပေးသော အုပ်ချုပ်ရေး မှူး
တရားရုံးတို့ ခတ္တ ဖေါ်ပြခြင်း မရှိသေးပဲ အမှုပေါ်ခြေရာခံနိုင်ရန် နေရာဒေ ကျေးရွာကိုသာပင် ဖေါ်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များမှ မည်သို့ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမည်ကို စာရေးသူမှ စောင့်ကြည့် သွေးတိုးစမ်း လေ့လာလျက်ပင်………….
မုဒီမျးကငျြ့ခံရသူ (၃) ဦး အတှကျ ဥပဒေ ဘယျမှာလဲ?
ပွငျဦးလှငျခရိုငျ သပိတျကငျြးမွို့နယျ တကောငျးအုပျစု ကြေးရှာတှငျ…
၁၀ နှဈအရှယျ ခလေးမ ၃ ဦး ကြာငျးတှငျ အကွိမျကွိမျ မုဒိမျးပွုကငျြ့ခံခဲရသညျ။
၁ ယောကျခငျြး/၁ ယောကျကိုကငျြ့နတေုနျး ကနျြသော၂ ယောကျကို ကွညျ့ခိုငျးပွီး ပွုကငျြ့သညျဟု သိရ၏။
ကလေးသုံးဦးမှ ဆရာဖွဈသူအား ကွောကျ၍ အိမျကိုမပွောရဲဘူး။
ဆရာဖွဈသူမှ နစေဉျအခြိနျပိုချေါပွီး နတေို့ငျး ကငျြ့ဖို့ကွိုးစားခဲ့ကွောငျး သို့ဖွငျ့၍
ကလေးသုံးဦးမှ အကွောကျအကနျငွငျးခဲ့ကွပွီး ကြောငျးသို့ပငျ မသှားရဲလောကျအောငျ နောကျဆုံး ဖွဈလာသောကွောငျ့ မိဘတှစေဈမေးတော့မှ ဖှငျဖျေါထုတျပွော ခဲ့ကွခွငျးဖွဈလသေညျ။
အဆိုပါ ကလေး မိဘမြားသညျ ဆငျးရဲ ခြို့တဲ့ကွပွီး l ခတျေပညာတတျမြား မဟုတျကွသညျ့အတှကျ သကျဆိုငျရာ ကြေးရှာအုပျခြုပျရေးမှုးသို့ တိုးတိုးတိတျတိတျ ပွောပွရာ ကြေးရှာ အုပျခြုပျရေးမှူးမှ မုဒိမျးကငျြ့သော ကြောငျးဆရာနှငျ့ တိုးတိုးတိတျတိတျ ငှကွေေးအနညျးငယျဖွငျ့ ညှိနိုငျးပေးခဲ့ကွောငျးသိရသညျ။
သို့သျော အဆိုပါ သတငျး ရပျရှာတှငျ ပေါကျကွားပွီးနောကျ ရပျရှာမှ တတျသိနားလညျသူမှ သကျဆိုငျရာသို့ အကွောငျးကွား ၀ိုငျးဝနျးတိုငျတနျးပေးခဲ့သညျ။ ခလေးသုံးဦး၏ မိဘမြားမှာ တရားရုံးသို့ ဖွရှေငျးရငျဆိုငျရနျ ရှိကွောငျးသိရပွီး ၄ငျးတို့ အနဖွေငျ့ ရှနေ့ငှေားရမျးရနျ ငှကွေေးမတတျနိုငျသောကွောငျ့ ယခုခြိနျထိပငျ မုဒိမျးပွုကငျြ့ခံရသော ကလေးမြားအတှကျ ကူညီဆောငျရှကျ ရှနေ့လေိုကျပါပေးမညျ့သူ တဈဦးတဈယောကျမှ မရှိသေးကွောငျး သိရသညျ။
လှနျခဲ့သော သောကွာ နတှေ့ငျ ပထမရုံးခြိနျးအဖွငျ့ လူတှေ့ မေးမွနျးမှု ပွီးဆုံးခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
တရားခံဖွဈ စှဲဆိုခံထားရသူဘကျမှ ငှားရမျးထားသော ရှနေ့မှေ မေးလာသညျ့ မေးခှနျးမြားကို တရားလိုမိဘတှေ ကွောကျရှံ့နကွေရခွငျးကွောငျ့ တရားရုံးတှငျ ငိုရှိုကျနကွေကွောငျး စာရေးသူအား ပွောပွလာပွီး အုပျခြုပျရေးမှူးနှငျ့ သကျဆိုငျရာ ရဲတပျဖှဲ့မှ ရဲတပျသားအဆငျ့သာသာမြှရှိသော သူတို့၏ ခြိမျးခွောကျခွငျးအား ခံနရေပွီး စာရေးသူအား သတငျးပေးပို့ ၍ သကျဆိုငျရာ အမြားသိစနေိုငျသော မီဒီယာတခုခုဖွငျ့ ကူညီဆောငျရှကျပေးရနျ ပွောပွလသေညျ။
ဖွဈစဉျအား စာရေးသူမှ လလေ့ာ၍ သကျငယျမုဒိနျးမှုမြား အပွီးသတျ သဒေဏျပေးရနျ လှတျတျောထိပငျ တောငျးဆိုလာသညျ့တိုငျ ရှိနပွေီး ကလေးမြားဘဝ တိကသြော အကာကှယျပေးနိုငျသညျ့ ထိရောကျ မွနျဆနျစှာ ကိုငျတှယျ ထိနျးသိမျးနိုငျသော ဥပဒေ အာဏာသကျရောကျမှု မရှိသေးကွောငျးကို အမြားပွညျသူမြားမှ ဝဖေနျနကွေသညျ။
ဖွဈစဉျ၏ ဖွဈရပျမြားအား စာရေးသူမှ သိရှိပွီးနောကျ အသေးစိတျလလေ့ာသောအခကျြတှငျ
ကြောငျးဆရာမှ မုဒိနျးကငျြ့သညျ့မှာ ခိုငျမာနကွေောငျး တှရှေိရပွီး သကျဆိုငျသောအုပျခြုပျရေးမှုးမှ နှဈဖကျအကွားတှငျ ငှကွေေး အနညျးငယျ လကျခံယူပွီး ခွိမျးခြောကျ ကွားဝငျညှိနှိုငျးကွောငျး ပျေါလှငျထငျးရှားစှာတှရေ့လသေညျ။
သကျဆိုငျရာ ဒသေရှိ ရဲဝနျထမျးမှလညျး ပွသနာ အခွနေအေရပျရပျတို့အား လလေ့ာခွငျး ကနျြးမာရေးဆိုငျရာ စဈဆေးမှုမြား လုပျဆောငျပေးခွငျး မရှိပဲ လဈလြူ ရှု့ထားကွောငျး ပျေါလှငျ ထငျရှားစှာ တှရေလသေညျ။
သို့ဖွဈ၍ အမှုလကျရှိဖွဈစဉျအရ မုဒိမျးကငျြ့သူနှငျ့ ဝငျရောကျညှိနိုငျးပေးသူတို့မှာလညျး အဆိုပါ ပွဈမှု ဖွဈစဉျအတှကျ ထပျမံပွဈမှု ကြူး လှနျကွောငျး သုံးသပျရသညျ။
သို့ကွောငျ့ အနာဂတျ မွနျမာနိုငျငံတျောအတှကျ အရှယျမရောကျသူခလေးမြား၏ လုံခွုံရေးမှာ ကွီးမားသော အန်တရယျ အခြိနျမရှေး ရရှိခံစားနိုငျရပွီး ပွငျးထနျပွတျသားသော ဥပဒကွေောငျးအရ အကာကှာယျပေးနိုငျသော အခွနေမှော အလှနျအားနညျးနကွေောငျးပါ။
အမှု စီစဈနိုငျရနျမွို့နယျ ဒသေ ကြေးရှာကိုသာ တငျပွခတ်တ တငျပွထား ထားပွီး
အထကျဖျေါပွပါ မုဒီမျးကငျြ့ခံရသူ ကြောငျးသူခလေး(၃) ဦး အမညျကိုသျော၎ငျး
အမှု ကွောငျးအရ မုဒိမျးကငျြ့သော ကြောငျးဆရာနှငျ့ ညှိနိုငျးပေးသော အုပျခြုပျရေး မှူး
တရားရုံးတို့ ခတ်တ ဖျေါပွခွငျး မရှိသေးပဲ အမှုပျေါခွရောခံနိုငျရနျ နရောဒေ ကြေးရှာကိုသာပငျ ဖျေါပွထားခွငျးဖွဈပါသညျ။ သကျဆိုငျရာ အာဏာပိုငျမြားမှ မညျသို့ ဖွရှေငျးဆောငျရှကျပေးမညျကို စာရေးသူမှ စောငျ့ကွညျ့ သှေးတိုးစမျး လလေ့ာလကျြပငျ………….